कैलाशको कुटी: कर्नाली दख्खिन बग्दो छ
Posted by कैलाश at 10:52 AM
मलाई पनि साह्रै हेर्न मन लाग्यो यो नाटक । पहिला पनि गुरुकुलको नाटक हेरिसकेपछि मलाई बेग्लै अनुभुति हुन्थ्यो । शायद यो नाटक स्थानीय कलाकारले खेलेको हुनाले झन् सशक्त छ होला जस्तो लाग्यो ।
नाटक त्यसमाथि गुरुकुल ले गरेको, त्यसै राम्रो हुन्छ भन्ने बुझाइ छ ।
१०-१५ दिन देखि नै यसको बारेमा सुनेको भएपनि, अनि हेर्न इच्छा लागेको भएपनि, काठमाडौँ बाहिर बसिने हुनाले समय मिलेको छैन हेर्ने ।
यहाँ देखिएको फोटो अनि लेखिएको कुराले पनि नाटक कत्ति को सशक्त होला भन्ने कुरो सहजै अनुमान गर्नसक्छु किनकी आधा दर्जन नाटकहरु मैले गुरुकुल मा हेरिसकेँ । पछिल्लो पटक हेरेको घनचक्कर मा पनि स्टेज मै धरहरा अनि पोखरी र डुंगा देखिएको थियो, त्यसको अलावा मैले अभिनय को कुरा गर्नु निरर्थक नै हुन्छ ।
कर्नाली दख्खिन बग्दो छ: यो नै वास्तविकता हो भन्ने अनुमान कथा पढेर र अरुको विश्लेषण हेरेर गरेको छु है ।
आफ्नो त भाग्गेमै छैन हौ कैलाशजी यस्तो नाटक हेर्ने , तपाईंले बरु झण्डै झण्डै नाटक हेरे जस्तै बनाईदिनुभयो । कर्णालीबाट आएका कलाकारहरु देश विदेशमा रहने सम्पुर्ण नेपालीहरुको छातीमा कर्णाली दुखाउन सफल हुन सकुन मेरो शुभकामना ।
सजीव वर्णनका लागि कैलाशजीलाई धन्यबाद! धेरै कुरा थाहा पाईयो। नेपाली रंगकर्मलाई विकास गर्न र यसका माध्यमबाट समाजमा चेतना फैलाउन गुरुकूलले गरेको तपस्याको जति प्रशंशा गरे पनि कम हुन्छ।
कर्णाली हेपिएको धेरै भयो र यो हेपिएको छ भनेर आवाज उठ्न थालेको पनि धेरै भईसक्यो। तर आजसम्म किन स्थितिमा परीवर्तन आउन सकेको छैन? कमजोरी कहाँ रह्यो? यति धेरै आवाज उठ्दा पनि राज्यले किन सुनेन? यस्ता प्रश्नहरुको जवाफ कर्नालीवसीले कहिले पाउलान्?
आफैंले यस्ता गतिला नाटकहरु हेर्ने भाग्य अब एक-दुई वर्षमै जुर्ला भन्ने आशा छ।
नाटकबारे पत्रपत्रिकामा धेरै आइरहेकोले कुटीमा नहालूकि भन्ने सोच थियो। अनि नाटक हेर्न गएको हाम्रो टिममध्ये कसैले लेखेमा म चुपचाप बस्ने पक्षमा थिए। आफूलाई सक्‌सक् भएर अरु साथीहरुलाई सोध्दा त कसैले लेख्ने फुर्सद नपाएको कसैलाई लेख्न मन नलागेको सुन्दा मैले नै मोटामोटी कुरालाई टिपेर राखिदिए।
विभिन्न कुरा तथा बाध्यतावस नाटक हेर्न नपाएको तर हेर्न मन हुँदा, यहाँ राखेको पोष्टको केही त काम लागेछ। धन्यवाद साथीहरुलाई।